Xog: Cadeymo muujinaya cida dishay Jeneraal Galaal oo loo gudbiyey madaxweyne Farmaajo – Hornafrik Media Network
MADASHA HORNAFRIKSomali News
Dilka marxuumka ayaa dhaliyey dood kala duwan iyadoo mas’uuliyiin ka tirsan dowlada Soomaaliya ay sheegeen in Janaraalka aanu ku dhiman gacanta kooxda Alshabaab, balse la shir qoolay.
Xil. Mahad Salaad, xil. Mustaf dhuxulow iyo Janaraal Indhacade ayaa kamid ah mas’uuliyiinta aaminsan in Janaraal Galaal ay dileen ciidamo ka tirsan dowlada Soomaaliya, ayagoo dalbadey in baaritaan madax-banaan lagu sameeyo dilka Janaraalka.
Ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in Taliyaha Dabagalka Cabdulla Daahir Cabdulla uu hordhigey Madaxwayne Farmaajo Kiis sheegaya in Genaraal Galal ay dileen Ciidamada Dowlada ee la dagalamayey Kooxdii dablayda ahayd ee gashay Hotelka.
MD Farmaajo ayaa la sheegay in uu ka biyadiidey oo ka carooday isagoo tilmaamey mid aan suuragal ahayn oo ay buunbuuninayaan mucaaradka dowlada.
War hoose ayaa sheegaya in Madaxwayne Farmaajo la hor dhigey muuqaal sir ah oo la duubey xiliga toogashadu dhaceysey kaas oo muujinayey in toogashadu sameynayeen askar ka tirsan ciidanka amniga dowlada Soomaaliya.
MD Farmaajo ayaa la sheegey in aad uga naxay filanwaana kunoqotey muuqaalka ladaawad siiyey madaxweynaha ayaa Teliyaha Dabagalka Kacodsadey in waqti lasiiyo isagoona sheegey in uu aad ugu mashquul sanayahay shirka ka socda Dhuusamareeb.
Teliyaha Tabagalka oo lagu tilmaamo Fileka Madow ee Farmaajo waa korneyl ka tirsan CIA Mareykanka waana xiriirayaha ugu awooda badan dhanka madaxweynaha iyo CIA-da waxaan xoga xasaasiga ah loo soomariyaa madaxeynaha sarkaalkan, sida ay sheegayaan saraakiil katirsan laamaha amaanka Soomaaliya oo magacooda qariyey.
Sarkaalkan ayaa la fahamsanyahay in uu haayo siraha qarsoon ee madaxweynaha waxaana marar badan lagu eedeeyey dilal qorsheysan iyo duqeymo aan loo meel dayin oo lagu laayey dad shacab ah.